२५ हजार तिरेर कोरोना परिक्षण गर्न पाइने समाचार भाइरल बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख खोल्यो, के हो यर्थाथ ? – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/२५ हजार तिरेर कोरोना परिक्षण गर्न पाइने समाचार भाइरल बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख खोल्यो, के हो यर्थाथ ?
काठमाडौँ । २५ हजार शुल्क तिरेर कोरोना परिक्षण गर्न पाइने समाचार बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बल्ल मुख खोलेको छ । सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा मन्त्रालयले शुल्क तोकेको हल्ला भएपछि मन्त्रालयले कुनै शुल्क नतोकिएको जनाएको हो । सरकारले कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिबारे निर्देशिका बनाएको छ ।
कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेहरुको सरकारले नै नि:शुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ । तर सरकारी निर्देशिकाको मापदण्डबाहिरका व्यक्तिले पनि कोरोना परीक्षण गर्न चाहेमा शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्ने जनाएको छ ।
शुल्कको बारेमा छलफल भइरहेको तर टुंगो नलागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समिर अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले निजी अस्पताललाई आरडीटी र सरकारी अस्पताललाई पीसीआर विधिमार्फत शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार भाइरल बनेको छ । तर उपचाररत मान्छेलाई मृत्यु भएको भन्दै भ्रामक समाचार बाहिरिएपछि अस्पतालले त्यसको खण्डन गरेको छ ।
अस्पताफ प्रशासनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेकाे भए पनि यता अस्पतालका अध्यक्ष चिन्तामणी पाण्डेले बुधबार संचारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै बिरामीको अहिले पनि आईसीयू कक्षमा भेन्टिलेटरको सहयोगमा उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘समाचारमा बिरामीको मृत्यु भएको कुरा आएको छ । तर यो सत्य होइन । उनको अहिले पनि अस्पतालमा उचपार भइरहेको छ । अवस्था गम्भीर छ ।’ बिरामीको अवस्था अघिल्लो दिनको जस्तै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
ग्यास पाउनु भएको छैन, यी स्थानमा जानोस् तत्कालै पाउनुहुन्छ (सूचिसहित)